Uganda oo joojisay Haweenkii Shaqaalaha ee loo diri jiray Sucuudiga | Gaaloos.com
Home » News » Uganda oo joojisay Haweenkii Shaqaalaha ee loo diri jiray Sucuudiga
Dowlada Ugandha ayaa joojisay haweenka wadankaasi ee shaqada u doonan jiray wadanka Sucuudiga, kadib markii ay soo baxday falal jirdil iyo dhibaatooyin badan oo loo geystay muwaadiniinta dalkaasi u dhashay ee ka shaqeeya Boqortooyada Sucuudiga.
Wasiirka Shaqada & Shaqaalaha Mr.Muruli Wilson Mukasa ayaa qoraal uu u qoray Wasaarada Arrimaha Dibada lagu baahiyey barta Twitterka.
Go’aanka Wasiirka ayaa soo baxay kadib markii baraha Internetka lagu shaaciyey Cod laga soo duubay haweenka Ugandha u dhashay ee hada ku xiran dalka Sucuudiga, haweenkaasi oo ka sheekeeyey dhibaatada loogu geysto wadanka Sucuudiga oo ay usoo shaqo doonteen.
Xaalada haweenkan oo ay shacabka dalka Ugandha si weyn uga hadleen ayaa keentay in Wasaarada ay go’aankan qaadato ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha.
Waxaa la filayaa in dhawaan go’aan rasmi ah dowlada Ugandha kasoo saarto xaalada haweenkooda ku sugan Sucuudiga.
Maaha markii ugu horeysay oo uu wadan haweenkiisa u diido inay u shaqo tagaan dalka Sucuudiga, waxaana horey go’aan kan lamid ah u gaaray dalalka Aasiya oo horey shaqaalo badan ugu soo diri jiray wadanka Sucuudiga.
Arrintan ayaa keentay in dalka Sucuudiga uu xooga saaro in shaqaalo haween ah ka keensado dalalka Afrika qaarkood isagoo balanqaad dhaqaale u sameenaya, dalka Soomaaliya ayaa kamid ah wadamada uu Sucuudiga ka codsaday in shaqaalo haween ah loo soo diro.
Safarkii uu Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud ku tagay dalka Sucuudiga dhamaadkii sanadkii hore ayaa la sheegay inay qeyb ka ahayd saxiixida heshiis dhexmara dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Sucuudiga oo ku aadan haween Soomaalida ah ee shaqaalo ahaan loo geenayo dalka Sucuudiga, mashruucaasi oo ay si weyn uga shaqeenaysay Safaarada Soomaalida ee dalka Sucuudiga iyo Safiirka cusub ee wadankaasi loo magacaabay.
Inkastoo ay soo baxayeen baaqyo ku aadan in haweenka Soomaaliyeed aan loo dirin dalka Sucuudiga ayey hadana dowlada Soomaaliya weli arrintan si faah faahsan uga hadlin.
Title: Uganda oo joojisay Haweenkii Shaqaalaha ee loo diri jiray Sucuudiga